IsiXhosa - Pick n Pay
Fresh Liquor Buds & Blooms Gift cards Pick n Pay Gift Card
Housebrands PnP Housebrand
Grape Natur de vigne
Mobile Offers KOBO Price
Ceres Juice Assorted	R11.99
per 1l	shop online now
Featured Recipes Recipes Search Appetisers
Food & Wine Pairings Step by Step Videos Party ideas & recipes My Recipe book My recipe book
Good Food Studio Good Food Studio Cape Town
Good Food Studio Johannesburg
View recipe Baked granola with cranberries
Party recipes & ideas Cooking for two From our Bloggers Handy tips Search
Elle Decoration Elle Decoration Solve Sport Sport nutrition supplements
Wine Win one of three Wreck-It Ralph hampers
Here’s your chance to WIN BIG and play the hero… just like Wreck-It Ralph!
Upcoming Events PICK N PAY TICKETS Book Tickets Online Spell Check Spell your way to victory
Afrikaans is groot Information
Women's Walks Information
KNYSNA OYSTER FESTIVAL About the festival
Taste of Durban Take a pic with Wreck-it Ralph!
Yes, the big-screen hero is coming to PIck n Pay Hyper in Brackenfell!
At the till Bill payment and electricity
Overview New customers How does it work?
smart shopper Household Account Partners Charities Videos FAQs Newsletters Promotions Axe Apollo
Competitions Cook & Win!
Life of Pi Competition
Win one of three Wreck-It Ralph hampers!
Terms & Conditions Winners Win one of three Wreck-It Ralph hampers
smart shopper videos
Imigaqo nemiqathango yekhadi
Ikhadi lakwa-Pick n Pay le-smart shopper likhutshwa lize lihlale ilelakwaPick n Pay Group okanye iinkampani abasebenzisana nazo. U-Pick n Pay unelungelo lokungavumi, ukunikezela nokurhoxisa ikhadi le-smart shopper nanini na.
Uyacelwa ukuba ungenise isazisi sakho saseMzantsi Afrika (Incwadi yokundwendwela ukuba awungommi woMzantsi Afrika) ukuze ubhalise, ukutshintsha amanqaku, ukutshintsha iinkcukacha zakho okanye ukulawula ikhadi kwanamanqaku akho ekhadi le-smart shopper.You are required to submit your valid South African ID (or for Non-South African Citizens Passport Number) to register, to switch your smart points, to change your details or manage your smart shopper card and points.
Ikhadi le-smart shopper alinakugqithiselwa.
Ukuze ufumane amanqaku xa uthenga, ikhadi lakwa-Pick n Pay le-smart shopper kufuneka ligqithiswe kwiindawo zokubhatala zakwaPick n Pay ukuze kurekhodwe ukuthenga kwakho. Ukuba akukho khadi ligqithiswayo ngaphambi kokuba ubhatale, amanqaku oko kuthenga awanakufumaneka. Ngaphezu koko akukho akukwazeki ukuba kufumaneke amanqaku ngeentengo ezenziweyo ngaphambili kwabe kungakhange kusetyenziswe ikhadi le-smart shopper.
Ngerandi nganye esetyenzisiweyo xa kuthengwa kwizinto ekufunyanwa kuzo amanqaku, kuzakufumaneka inqaku le-smart. Akukho manqaku azakufumaneka kumaxabiso aziisenti.
Izinto ongenakufumana manqaku kuzo ngamafutha eenqwelo, icuba kwaneemveliso ezinento yokwenza necuba, ikhadi lesipho lakwaPick n Pay nelokongeza, ukuthunyelwa kwemali, amayeza kwaneenkonzo zabaniki-nkonzo abangabanye, iPnP Travel kunye neentlawulo eziquka kodwa ezingaphelelanga embaneni, iikhuponi ze-USA Visa, iikhuponi ze-Axxess ADSL, i-Inshorensi yakwaHollard, U-Kash, ivawutsha yakwaSAA Cycle, iikhuponi zakwa-Austrian Visa, Just Surf, Retail Bonds, nawo onke amatikiti elotto, uSAA namatikiti ebhasi, Multichoice, izohlwayo zezendlela, amakhadi eSplashout Mall kunye neentlawulo zenkam-nkam. U-Pick n Pay unelungelo lokuzikhuphela ecaleni iimveliso ezithile nanini na ekungazukufunyanwa manqaku ngazo ngokokubona kwakhe.
Amalungu kaDiscovery asenokubhalisa kwinkqubo yekhadi le-smart shopper aze afumane izibonelelo kuwo omabini la malungiselelo. Ukuveza nokuhambisa omabini amakhadi ematshinini kuyafuneka ukuze ufumane izibonelelo kuwo omabini amalungiselelo.
Amanqaku e-smart azakuvela kwi-akhawunti yakho yomthengi onobuchule kwiintsuku ezintlanu emva kokuba uthengile.
Wakube uqokelele amanqaku ali-1000 (ngokuxhomekeke kwiintsuku ezi-5 ezichazwe ku-8 apha ngasentla) ungakwazi ukuguqula amanqaku akho abe yimali eziinkozo okanye unikezele ngawo kumbutho woncedo ozikhethele wona. Usenokonga kangangoko ufuna. Usenokuguqula okanye unikezele ngeeyunithi zamanqaku ali-100.
Ukuwajonga amanqaku nokuwatshintsha kuxhomekeke koomatshini bekhompyutha abakhoyo evenkileni.
U-Pick n Pay unelungelo lokutshintsha ixabiso lokuguqulwa kwamanqaku ngokokubona kwakhe.
Amanqaku asenokutshintshelwa kwixabiso lawo lwemali eziinkozo okanye agqithiselwe kumbutho woncedo kumatshini we-smart shopper okhoyo kuyo nayiphi na ivenkile kaPick n Pay eMzantsi Afrika, ngaphandle kokuba kuchazwe ngandlela yimbi.
Amathuba okufumana amanqaku ongezelelekileyo azakunikezelwa ngokokubona kukaPick n Pay.
Amanqaku e-smart kunye nemali efunyenwe kumanqaku e-smart azakusebenza nje iminyaka emi-3. U-Pick n Pay unelungelo lokuvala nayiphi na i-akhawunti ye-smart shopper ethe ayasetyenziswa (akukho manqaku e-smart shopper afunyanwayo, atshintshwayo okanye ekugqithiselwa ngawo) kangangeenyanga ezingama-24 ezilandelelanayo. Amanqaku e-smart nemali enxulunyaniswa nawo nayo izakulahleka.
Amanqaku e-smart afunyenwe ngokuthenga apho izinto ezithengiweyo zithi zibuyiselwe, loo manqaku azakutsalwa kumanqaku e-smart akwikhadi lakho le-smart shopper.
Ikhadi lakho lePick n Pay smart shopper alinakusetyenziswa njengekhadi letyala okanye elokubambisa.
U-Pick n Pay unelungelo lokuguqula okanye atshintshe imiqathango yokusebenza kwenkqubo yekhadi le-smart shopper okanye alirhoxise nanini na. Xa kurhoxiswa inkqubo, amanqaku e-smart azakuhlala ekho kangangeentsuku ezingama-30. Iimbuyekezo zemali ezikwi-akhawunti yomthengi azinakuchaphazeleka.
Xa kuthe kwabakho uqhankqalazo olude okanye uvukelo lwabasebenzi, uPick n Pay unelungelo lokunqumamisa ukutshintshwa kwamanqaku e-smart etshintshelwa kwimali eziinkozo kangangexesha elizakubekwa nguye.
Imali ethe yazala ngokotshintsho lwamanqaku e-smart iza kuhlala iyimali eyiyo. Akukho mthengi oza kufumana imali eziinkozo kwilungiselelo le-smart shopper. Ixabiso lemali lidityanisiwe kwikhadi le-smart shopper kwimeko apho linokuthi lisetyenziswe njengekhadi elisisipho.
Inombolo yeselifowuni eyiyo kunye/okanye idilesi yeposi, kunye/okanye idilesi ye-imeyili iza kufuneka kumntu ngamnye ongumninikhadi lakwaPick n Pay le-smart shopper kunxibelelwano olwenziwayo. Akukho nxibelelwano luza kwenziwa kwiinombolo zefowuni, iidilesi zeposi kwaneedilesi ze-imeyilie ezingaphandle kwaseMzantsi Afrika.
Asisoze sabelane nayo nayiphi na inkampani ngeenkcukacha zakho ngaphandle kokuba kunyanzelekile ukuze ukusebenza kwenkqubo ye-smart shopper kube yimpumelelo.
Kuwo onke amakhadi alahlekileyo, abiweyo namoshekileyo qhagamshelana noMphathi weeNkonzo zaBathengi osevenkileni ukuze ufumane uncedo, okanye iZiko leMinxeba lakwaPick n Pay ku-0800 11 22 88. Usenokuyalela uPick n Pay ukuba alivale/aliyekise ikhadi lakho elilahlekileyo, elibiweyo, okanye elingasebenziyo ukuba lingasetyenziswa uze ucele ikhadi elitsha.
Amanqaku e-smart ahamba nekhadi elilahlekileyo, elibiweyo okanye elingasebenziyo asenokugqithiselwa kwikhadi lakho elitsha. Kodwa, naliphi na ixabiso lemali elihamba nekhadi elilahlekileyo, elibiweyo okanye elingasebenziyo alinakufumaneka. Ukuba amanqaku e-smart atshintshiwe okanye kunikezelwe ngawo ngaphambi kokuba ikhadi livalwe, elo xabiso lalo manqaku lisenokungafumaneki. U-Pick n Pay akanabutyala bokulahleka kwamanqaku okanye kwexabiso lemali.
Nakuphi na ukusetyenziswa gwenxa kwekhadi le-smart shopper nguye nawuphi na umntu oko kukwaphula umthetho kwaye uPick n Pay unelungelo lokunqumamisa ubulungu baloo mntu aze awabambe onke amanqaku akwi-akhawunti yakhe. Amakhadi angengawo okanye angasebenziyo okanye amanani amakhadi awanakunikwa manqaku.
Ukubhaliswa njengelungu lenkqubo ye-smart shopper kuyakubophelela ngesivumelwano kule Migaqo neaMiqathango ingasentla.
Imiqathango ethile ephathelele kwiivawutsha ze-smart shopper
Iivawutsha ze-smart shopper zikhutshwa nguPick n Pay ezikhuphela uluhlu olukhethwe kwangaphambili lwabathengi ngokwendlela abathenga ngayo kwixesha elithile.
Iivawutsha ze-smart shopper zisebenza kuzo zonke iivenkile zakwaPick n Pay eMzantsi Afrika apho kukho khona iimveliso zeevawutsha ze-smart shopper, ukuba zisafumaneka.
Iivawutsha ze-smart shopper zisebenza kwixesha elithile elibekwe nguPick n Pay. Ixesha elililo lokusebenza lizakuboniswa kwiivawutsha ze-smart shopper.
Iivawutsha ze-smart shopper kufuneka ziskenwe xa kuthengwa ngazo, ndawonye nekhadi lomnini-akhawunti we-smart shopper.
Iivawutsha ze-smart shopper kufuneka zisetyenziswe ngumnini-akhawunti we-smart shopper kuphela kwaye azinakugqithiselwa.
Ivawutsha ye-smart shopper inokushicilelwa kube kanye kuphela. Akunakuphinde kushicilelwe ezinye iivawutsha.
Ivawutsha ye-smart shopper izakusetyenziswa kube kanye kuphela – emva koko ayisayi kusebenza.
Ivawutsha ye-smart shopper izakusebenza kuphela phantsi komqathango othi “kuphela ngeli lixa zisekhona izinto”.
Ukuba zikho naziphi na iingxaki ngokushicilelwa kweevawutsha okanye ukungasebenzi kakuhle komatshini we-smart shopper, qhagamshelana nomsebenzi wecandelo lezabathengi apho evenkileni ukuze ufumane uncedo.
Enkosi Ngokuthenga kuthi
Pick n Pay Graduate Program